pvmuqdisho – Page 2 – Puntland Voice
DEG DEG: Hantidii Madaxtooyada Villa Soomaaliya ee Muqdisho oo La Boobayo
Hanti isugu jirta gawaari, agab kala duwan, iyo hub ayaa la sheegay in lagala baxay Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia, iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay ay si xooggan u socotay arrintan. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in xubno […]
Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo Hargeysa lagu Xiray
War Deg Deg Ah oo hadda naga soo gaaraya Magaalada Hargeysa Ee Xarunta Maamulka Soomaaliand ayaa ku waramaya in Halkaasi lagu Xiray wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. Wariye Cooldoon ayaa ku Sugnaa Muqdisho waxaana uu la kulmay islamarkaasina uu taageero u […]
Soomaliand oo Codsi u Dirsatay Madaxweynaha Cusub Mareykanka Donald Trump
Xukuumada Somaliland ayaa ka codsatay dowladda Mareykanka in laga saaro liiska dalalka Trump uu ku soo rogay xayiraadda Socdaalka. War qoraal ah oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa lagu xusay in Isniintii dowlada […]
AKHRISO: Dowlada Soomaaliya oo Hakisay Howlihii Garoonka Muqdisho
War kooban oo ka soo baxay wasaarada Duulista hawada sare ee xukuumada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la hakiyay howlihii garoonka Muqdisho Maalinta Arbacada ah ee soo socoto 22-ka Bishaan. Wasaarada ayaa sheegay in aanay wax diyaarad ah ka soo […]
Dagaal Culus oo ka Biloowday Deegaanka Camaara
Wararka ka imaanaya Gobolka Mudug ayaa ku waramaya in dagaal culus uu goordhow ka qarxay deegaanka Camaara ee Gobolkaas, kaasi oo u dhaxeeya Ciidamada Huwanta ah iyo Al-shaabab oo deegaankaas ku xoogan. Dagaalkan goordhaweyd ka qarxay deegaanka Camaara ayaa bilowday kadib […]
Dooni u rarneyd Gal-Mudug oo ku Degtay Xeebaha Hindiya
Dooni u rarneyd Ganacsato ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo ka soo Shiraactay dalka Imaaraadka ayaa ku Degtay Badweynta Hiinyada . wararka ayaa waxa ay sheegayaan in duunidaan ay ku ku timid Cilad dag dag ah iyo Mowjado Dabaylo ah. Dooni […]
AKHRISO: Taariikhda Madaxweynaha Cusub Ee La Doortyay Mudane Farmaajo
Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo ku magac dheer Maxamed Farmaajo waxa uu ahaa Ra’iisul wasaarahaii hore ee dowladii kumeelgaarka Soomaaliya. Maxamed farmaajo waxaa barlamaankii DFKMG ansixisay taariikhda marka ee eheed 31 Oktoobar 2010. waxa uuna xilka iska casilay taariikhda marka ee […]
Madaxweynihii hore ee Puntland Cadde Musse Xirsi oo geeriyooday
Waxaa goordhow geeriyooday Allaha u naxariistee Cadde Muuse Xirsi Madaxweynihii hore ee Puntland. Cadde Muuse ayaa ku geeriyooday magaalada Abu Dubai ee Dalkaasi Dubai, sida ay sheegayaan wararka halkaasi ka imaanaya. Cadde Muuse Xirsi ayaa baryihii ugu dambeeysya ku xanuunsanayay […]
Farmaajo oo Ku Guuleeystay madaxweynaha Soomaaliya
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku guuleystay xilka madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, ka dib markii Xasan Sheekh Maxamuud uu tanaasulay wareeg Seddexaad. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku guuleystay 184 cod, halka Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo xigay uu helay […]